Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Achọ ndị kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe? Mgbe ahụ na-agụ na! Anyị maara ị na-ahọrọ a mahadum bụ otu ihe dị mkpa na-ahọrọ. N'ezie, onye ga-ewere echiche na-ezi ihe ma na-amụta ụlọ ọrụ na a mahadum awade mgbe ị na-ahọrọ nke na otu onye na-aga. Otú ọ dị, sometimes a…